Uhlangothi oluhle lwe-loch olufanele ngokubuka okuhle - I-Airbnb
Uhlangothi oluhle lwe-loch olufanele ngokubuka okuhle
North Connel, Scotland, i-United Kingdom
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Caroline
I-Cairns isendaweni engamakhilomitha angu-4 enyakatho ye-Oban eNorth Connel eduze nosebe lwe-Loch Etive. Ifulethi eliqokwe ngokugqamile, elinesitezi sokuqala, elinokubukwa okukhangayo kwe-balcony kuyo yonke indawo eya e-Connel Bridge. I-King size bed, amagumbi okugeza angu-2. Siyakwamukela hamper. Ikhishi elihlome kahle elinomshini wokuwasha izitsha. Ama-pubs/izindawo zokudlela ezimbili ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Indawo yokupaka enhle. Indawo yokugcina ibhayisikili ephansi. Isephulelo sokuhlala ubusuku obungu-7 noma ngaphezulu.
Igumbi lokulala elilodwa elithulile eline-en-suite elibekwe ngemuva kwefulethi. Umbhede olingana nenkosi onoqweqwe lukamatilasi, okombhede wekhwalithi enhle namathawula amakhulu, athambile okugeza. Amashawa amahle anezinto zokugeza zikanokusho nomfutho ophakeme. Ikhishi elivulekile / igumbi lokudlela / igumbi lokuhlala eline-Juliet balcony. Ikhishi liyingxenye yegumbi elilula, elinohlelo oluvulekile elinendawo yokudlela yasekuseni, itafula lokudlela, osofa abangu-2 kanye nezihlalo ezi-2 ngasezicabheni ze-balcony ukuze wenze okuhle nokubuka izilwane zasendle. I-HD smart TV nesidlali seDVD. Ikhishi elihlome kahle kakhulu elinomshini wokuwasha izitsha, inqwaba yezinto zokusika nezitsha, amapani okupheka e-Le Creuset, iphrosesa yokudla yaseKitchen Aid, umshini we-Espresso nezingilazi zewayini ezihlanzekile ngokukhazimulayo! Igumbi lokugezela lesibili elinebhavu neshawa. Umshini wokuwasha, isomisi, i-ayina kanye nendawo yokubeka izingubo. Ukukhethwa kwama-DVD, i-Scrabble kanye ne-jigsaw. Ukushisa unyaka wonke uma kudingeka. Isiginali yefoni enhle kakhulu, i-Wifi nephrinta engenantambo yokusebenza ekhaya.
Indawo yokuhlala enokuthula enendawo yokupaka elula. Isizinda esiphelele sohambo losuku oluya enyakatho ukuya e-Glencoe nase-Ben Nevis, uthatha isikebhe usuka e-Oban uya e-Mull nase-Iona. Ukuhamba okumangalisayo eduze kwaseBen Lora, eSutherlands Grove, esiqhingini saseKerrera naseTralee beach. Ngaphakathi kwebanga lokushayela elilula le-Oban distillery, i-Cruachan hydro power station, idolobha elihle lase-Inveraray, i-Dunstaffnage ne-Dunollie castles kanye nezitolo zase-Oban nase-Fort William.
I-Oyster Inn kanye ne-Lochnell Arms zihamba ibangana nje eduze kwebhuloho elinikeza ukudla kwakusihlwa. Ngenyama yenkomo yasendaweni ehamba phambili sincoma i-Old Inn e-Appin (kuyafaneleka ukubhukha) noma ngenhlanzi Indawo yokudlela yase-Waterfront e-Oban. Izinhlanzi nama-chips e-Tralee bay Wed-Sat ngesizini. Isidlo sasemini esiseduze nesikhungo sengadi ye-Poppies sinikezela ngesobho elihle lokuzenzela kanye nokubhaka. Ama-scones ahamba phambili e-Ben Lora Cafe e-Benderloch (uhambo oluthandekayo endleleni yamabhayisikili).
Bheka ama-seal eduze kwebhuloho futhi ubheke amahlengethwa e-Loch Etive noma uthathe indiza ebukekayo usuka esikhumulweni sezindiza sase-Oban.
Zihlole wena usebenzisa isisefo sokhiye onekhodi. Mancane amathuba okuthi ngibone izivakashi kodwa ngingathintwa ngocingo uma kukhona okudingayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- North Connel namaphethelo